Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NH3 + 3 (CH2CH2O → (HOCH2CH2)3N
Oxirane waxay la falgashay NH3
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga (HOCH2CH2) 3N, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NH3 + 3 (CH2CH2O → (HOCH2CH2)3N
etanoic acid ammonia
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3COOH + NH3 . CH3COONH4
Waa maxay xaalada falcelinta ee CH3COOH (ethanoic acid) ay kaga falceliso NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COONH4 ()?
Khamri ayaa la falgalaya NH3
Dhacdada ka dib CH3COOH (ethanoic acid) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3COOH + NH3 . CH3COONH4
ammonia chloride ammonium
(lng) (kh) (lng) (rnn)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C6H5Cl + 2NH3 . C6H5NH2 + NH4Cl
Waa maxay xaalada falcelinta ee C6H5Cl () ay kaga falceliso NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C6H5NH2 () iyo NH4Cl (ammonium chloride)?
C6H5Cl waxay la falgashaa NH3
Dhacdada ka dib C6H5Cl () waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C6H5Cl + 2NH3 . C6H5NH2 + NH4Cl
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C6H5Cl ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C6H5Cl ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H5Cl () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C6H5NH2 (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H5NH2 () badeecad ahaan?
chloride aluminium biyaha ammonia aluminium hydroxide chloride ammonium
(lng) (kh) (kt)
(trung) (xoog leh) (xoog leh) (trung) (trung)
1 3 3 1 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3 + 3NH4Cl
Waa maxay xaalada falcelinta ee AlCl3 (aluminium chloride) kaga falcelisa H2O (biyaha) waxay ula falgalaan NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al (OH) 3 (aluminium hydroxide) iyo NH4Cl (ammonium chloride)?
Dhacdada ka dib AlCl3 (aluminium chloride) waxay la falgalaan H2O (biyaha) waxay la falgalaan NH3 (ammonia)
Xalka Amonia wuxuu ku falcelin karaa xalka milixda ee biraha badan si loo abuuro hawo-dilid biraha noocaas ah
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3 + 3NH4Cl
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Al(OH)3 (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al (OH) 3 (aluminium hydroxide) alaab ahaan?